घर > २०२० मा अल्फा GPC को सर्वश्रेष्ठ Nootropic पूरक
हाम्रो रायमा, सबै भन्दा राम्रो Nootropic पूरक अल्फा GPC २०२१ मा व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हो Cofttek अल्फा GPC। यस परिशिष्टको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो शाकाहारी / शाकाहारी उत्पादन हो र यसैले सबैले यसलाई लिन सक्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पूरकले कुनै गहुँ, ग्लुटन, दुग्ध, अण्डा, माछा र पागल समावेश गर्दैन। यसैले, एलर्जी भएका व्यक्तिहरूका लागि उपभोगका लागि पनि उपयुक्त छ। यद्यपि, यदि तपाईंसँग कुनै प्रीक्सीटि conditions सर्तहरू छन् भने, तपाईंले पहिले आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ। यो पूरै केवल सकारात्मक समीक्षाहरू प्राप्त गरेको छ र वास्तवमा यसले के गरेको दावी गर्दछ।
अल्फा GPC केको लागि राम्रो छ?
अल्फा GPC लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
अल्फा GPC ले तपाईंलाई थाकेको बनाउँछ?
अल्फा मस्तिष्कको साइड इफेक्ट छ?
के तपाईं सँगै अल्फा GPC र CDP choline लिन सक्नुहुन्छ?
अल्फा GPC प्राकृतिक छ?
अल्फा दिमाग सुरक्षित छ?
अल्फा मस्तिष्कको प्रभाव कहिलेसम्म टिक्छ?
अल्फा दिमाग वास्तवमा काम गर्दछ?
के जो रोगनको अल्फा दिमाग छ?
अल्फा दिमाग कानूनी छ?
सबै भन्दा राम्रो Nootropic पूरक के हो?
सबै भन्दा राम्रो मस्तिष्क पूरक के हो?
अल्फा GPC HGH वृद्धि गर्दछ?
के choline डिप्रेशन को कारण छ?
अल्फा दिमागमा के समावेश छ?
के CDP कोलाइन सुरक्षित छ?
Noopept का प्रभावहरु के हुन्?
के अल्फा GPC डोपामाइन बढाउछ?
अल्फा GPC ले कत्तिको चाँडो काम गर्दछ?
कोलीन अभावका लक्षणहरू के हुन्?
के चिलोन चिन्ताको लागि राम्रो छ?
कोलोनको उत्तम स्रोत के हो?
म कसरी प्राकृतिक रूपमा कोलाइन पाउन सक्छु?
तपाइँ कसरी पोलिनको कमीको लागि परीक्षण गर्नुहुन्छ?
अल्फा GPC लाई के मन पर्छ?
के कोलीन सप्लीमेन्टहरू प्रभावकारी छन्?
के साइटिकोलिन कोलीन जस्तै हो?
के साइटिकोलिनले डोपामाइन बढाउँदछ?
कोलाइन र फास्फेटिल्डकोलीन बीच के भिन्नता हुन्छ?
के choline चिन्ता पैदा गर्दछ?
के कोलीनले सेरोटोनिन बढाउँदछ?
कोलीनका साइड इफेक्टहरू के हुन्?
के कोलीनले तपाईंलाई उर्जा दिन्छ?
के लेसिथिन चिन्ताको लागि राम्रो छ?
अल्फा GPC को साइड इफेक्ट के छन्?
अल्फा GPC पानी वा मोटो घुलनशील छ?
अल्फा दिमाग प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
मस्तिष्क पूरक काम गर्दछ?
के Nootropics ले टाउको दुख्न सक्छ?
के धेरै धेरै पोलिन हानिकारक हुन सक्छ?
के तपाई दिनहुँ अल्फा GPC लिन सक्नुहुन्छ?
Nootropics सुरक्षित छन्?
बजारमा सब भन्दा राम्रो दिमाग को गोली के हो?
कफि एक Nootropic छ?
कुन Nootropics वास्तवमा काम गर्दछ?
के CBD एक Nootropic हो?
अल्फा GPC का फाइदा के हो?
अल्फा GPC प्रशासनले न्युरोट्रान्समिटर एसिटाइलकोइनको रिलीज बढाउँदछ र सिकाई र मेमोरीको सुविधा प्रदान गर्दछ। एथलीटहरूमा, अल्फा जीपीसी पूरकले व्यायाम-प्रेरित कटोलन कोलोनको स्तरमा रोक्छ, धीरज प्रदर्शन र वृद्धि हर्मोन स्राव बढाउँदछ।
अल्फा GPC पूरक को days दिन पछि कम शरीर बल उत्पादन वृद्धि गर्न मा प्रभावी छ। खेल प्रदर्शन कोचहरूले मांसपेशी प्रदर्शन बृद्धि गर्न गति र शक्ति एथलीटहरूको आहारमा अल्फा GPC थप्न विचार गर्न सक्दछन्।
यसले तपाईंलाई राती अझ थकित बनाउँछ, तर यसले तपाईंको दिमागले दिनको समयमा गरेको उच्च गुणस्तरीय कार्यको कारण बुझ्दछ। र निस्सन्देह, तपाईंले सुत्नु आवश्यक छ दिमागमा पूरै दिनको सम्झनाहरू प्रक्रिया गर्न दिनुहोस्।
अल्फा ब्रेन को साइड इफेक्ट धेरै दुर्लभ छ। अल्फा ब्रेन क्लिनिकल परीक्षण र प्रमाणको आधारमा पूरकका प्रतिकूल प्रभावहरूको बारेमा कुनै रिपोर्ट छैन।
यी दुई choline पूरक सँगै राम्रो सँग काम गर्दछ। ... अल्फा GPC फास्फेटिडेक्लोइन (पीसी) को एक उप-उत्पादन हो। र पूरक CDP Choline पीसी संश्लेषण को लागी आवश्यक uridine प्रदान गर्दछ। यसैले सँगै लिएकोमा, तपाईले आफ्नो मस्तिष्कलाई कोलोइनको प्रकार प्रदान गर्नुहुन्छ जुन सेलुलर स्तरमा चाहिन्छ।
अल्फा GPC एक स्वाभाविक रूपमा हुने अणु हो जुन दिमाग भित्र रहन्छ। यो महत्त्वपूर्ण पोषक, बी-भिटामिन परिवारसँग नजिकबाट सम्बन्धित, विशेष रूपमा सेल झिल्ली न्यूरन्सभित्र बास गर्दछ।
अल्फा ब्रेन एक सुरक्षित हो nootropic पूरक। यद्यपि, तपाईंले औषधि अन्तरक्रियाको सन्दर्भमा वा आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग गर्दा केही सानो साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले सिफारिस गरिएको खुराकमा अडिग रहनुपर्छ र कुनै पनि नोट्रोपिक सप्लिमेन्ट लिनु अघि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श गर्नुपर्छ।
अल्फा ब्रेन6घण्टा भन्दा बढि रहन्छ। अल्फा ब्रेनमा केहि स्वतन्त्र समीक्षाका अनुसार प्रभावहरू 7-8 घण्टा भन्दा बढी रहन सक्छ।
१ --6 उमेरका स्वस्थ वयस्कहरूको समूह नियन्त्रणको साथ तुलना गर्दा-हप्ताका लागि अल्फा मस्तिष्कको प्रयोगले भर्खरको मौखिक मेमोरी र कार्यकारी कार्यमा सुधार ल्यायो। यस परीक्षणको नतिजा संज्ञानात्मक बृद्धि को आवेदन मा थप अध्ययन योग्यता पूरक एथलेटिक प्रदर्शनमा।
जो रोगन ओन्निट नामक कम्पनीसँग सम्बद्ध छ, जसले अल्फा ब्रेन बनाउँदछ, उत्पाद जुन मौखिक रिकल र कार्य सम्पन्नता सुधार गर्ने हो। अल्फा ब्रेन बजारमा केहि उत्पादनहरू मध्ये एक हो जुन क्लिनिकल परीक्षणहरू गर्दछ र रोगनको विश्वास छ कि यसले प्लेसबोभन्दा राम्रो शब्दहरू र वाक्यांशहरू सम्झन मद्दत गर्दछ।
यस अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै ओन्निट औब्रे मार्कसले भने: “अल्फा मस्तिष्कमा एम्फाटामिन वा अन्य प्रतिबन्धित पदार्थहरू छैनन् भन्ने कुरा हामी स्पष्टसित भन्न सक्छौं। हामी वैकल्पिक रूपमा अल्फा मस्तिष्कको प्रत्येक ब्याचको परीक्षण आफ्नै खर्चमा गर्छौं भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि कि हाम्रा उत्पादनहरू कुनै पनि प्रतिबन्धित वा गैरकानुनी पदार्थहरूबाट स्वतन्त्र छन्।
अल्फा GPC मस्तिष्कमा फेला परेको एक स्वाभाविक-अवस्थित कोलाइन यौगिक हो। यो कम्पाउन्ड पनि जारी हुन्छ जब सोया र अन्य बोटहरूमा पाइने फ्याट्टी एसिड बिग्रिन्छ। यद्यपि अल्फा GPC स्वाभाविक रूपमा अवस्थित छ, यसको प्राकृतिक एकाग्रता र मात्रामा, यो समर्थन गर्नको लागि डिजाइन गरिएको कार्यहरू गर्नको लागि पर्याप्त छैन। यसैले, अल्फा GPC अक्सर पूरक आहार पूरकको रूपमा खपतका लागि सिफारिश गरिन्छ जसमा अल्फा GPC समावेश छ या त रासायनिक वा फास्फेटिडिलकोलीन-संवर्धित सोया फोस्फोलिपिडको एन्जाइमेटिक डिसेलेसन मार्फत उत्पादित।
अल्फा जीपीसीमा बर्षौंको अनुसन्धानले यसलाई प्यारासिम्पाथाइमेटिक एसिटिल्कोलिन अग्रदूतको रूपमा स्थापित गरेको छ जसले प्यारासिम्पाथेटिक स्नायु प्रणालीलाई उत्प्रेरित गर्दछ र त्यसैले सक्रिय रूपमा अल्जाइमरको उपचार र डिमेन्शियाको विभिन्न रूपहरूमा मद्दत गर्दछ। अल्फा GPC सबैभन्दा कुशल कोलोन प्रोड्रग पनि हो र यसैले यस कम्पाउन्ड सहित पूरकहरूले आहार कोलोनको स्रोतको रूपमा काम गर्छन्। कोलिन एक आवश्यक पोषक तत्व हो जुन शरीरलाई धेरै आवश्यक कार्यहरू गर्न आवश्यक पर्दछ, जस्तै सेलुलर वृद्धि र मेटाबोलिजम। अल्फा GPC पनि एक प्रभावी nootropic हो कि मस्तिष्कको संज्ञानात्मक समारोह बढाउछ। यो प्रायः बुढेसकालका बिरामीहरूलाई दिइन्छ जुन संज्ञानात्मक गिरावटको अनुभव गरिरहेका छन्। अल्फा GPC सेवन पनि शरीर भित्र विकास हार्मोन को उत्पादन बढाउन सक्छ र यसैले, काम वरिपरिको एथलीटहरु आफ्नो समग्र उर्जा उत्पादन वृद्धि गर्न अल्फा GPC पूरक प्रयोग गर्दछ।
अल्फा GPC सप्लीमेन्टहरू उनीहरूको साथ धेरै सम्भावित फाइदाहरू ल्याउँछ। सुरू गर्नका लागि, अल्फा GPC मस्तिष्क स्वास्थ्य र प्रकार्य सुधार गर्न परिचित छ। यसले शरीरसँग डोपामाइनको स्तर बढाउँदै गर्छ। धेरै अध्ययनहरूले पनि यो कम्पाउन्डलाई सुधारिएको मेमोरी फंक्शन र सिक्ने क्षमतासँग जोडेको छ। केहि विशेष केसहरूमा, अल्फा GPC सप्लीमेन्ट्सले मेमोरी पुन: स्थापित गर्न पनि सक्षम भएको छ जबकि त्यस्ता केसहरू टाढा र केहि कम छन्। मस्तिष्क र संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार गर्नु बाहेक, त्यहाँ प्रमाणहरू छन् कि अल्फा GPC लाई अल्जाइमर, डिमेन्शियाका विभिन्न रूपहरू, र ट्रान्जियन्ट इस्कीमिक आक्रमणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न पर्याप्त प्रमाणहरू छन्। कम्पाउन्ड एथलीटहरू द्वारा पनि प्रयोग गरिएको छ किनकि यसले उनीहरूको प्रदर्शन आउटपुट बढाउँदछ। अन्तमा, अल्फा GPC का धेरै स्थापित फाइदाहरू छन्, एक मुख्य कारक जसले हालका वर्षहरूमा यसको लोकप्रियतामा थप्यो।
अल्फा GPC एक पुतीवाचक एसिटाइलकोलीन अग्रदूत हो जसले एसिटिचोलिन-उत्तेजित केटेकोलामाइनको कार्यमार्फत विकास हार्मोन स्राव सम्भवतः वृद्धि गर्दछ।
हामीले प्लाज्मा कोलाइन र डिप्रेसन लक्षणहरू बीचको सम्बन्धको सम्बन्धित विश्लेषणहरूमा कुनै महत्वपूर्ण सम्बन्धहरू फेला पारेनौं। यो ठूलो जनसंख्यामा आधारित अध्ययनमा, कोलीन एकाग्रता नकारात्मक चिन्ताका लक्षणहरूसँग सम्बन्धित थियो तर डिप्रेसन लक्षणहरूको साथ भने होइन।
अल्फा ब्रेनमा दुई सामग्रीहरू हुन्छन् जसले एसिटिचोलिनको स्तरलाई बढावा दिन्छन्: जीपीसी कोलाइन, जसलाई शरीर एसिटिचोलिनमा परिणत गर्दछ, र ह्युपरजिन ए, चिनियाँ क्लब मोसबाट लिइएको अल्कालोइड, हुपर्जिया सेराटा पनि भनिन्छ।
सीडीपी कोलाइन सुरक्षित औषधि हो, जस्तो कि विषाक्तिय परीक्षणहरूले देखाए; यसले कोलिनेर्जिक प्रणालीमा कुनै गम्भीर प्रभाव पार्दैन र यो पूर्ण रूपमा सहन गरिन्छ।
Noopept को सम्भावित साइड इफेक्टमा निद्रा गडबडी (//5१ बिरामी), चिडचिड (//31१), र रक्तचाप (//3१) बढेको (नेज्नामोभ र Teleshova, २००)) समावेश छ। कृतिपूर्व अनुसन्धानबाट कार्य गर्ने संयन्त्र कृन्तकहरूमा गरिएको एक अध्ययनले देखाए कि नोपप्टले रक्तको मस्तिष्क अवरोध पार गर्यो।
अल्फा GPC को लागि मेमोरी गठन सुधार गर्न र सिक्ने क्षमता बढाउन यो सम्भव हुन सक्छ। अल्फा GPC ले डोपामाइन लेभल पनि बढाउन सक्छ, जसले मस्तिष्कको कार्यलाई महत्वपूर्ण लाभ पुर्‍याउँछ।
चिन्तित वा अस्वस्थ महसुस।
फ्याटि कलेजो, अन्यथा गैर-अल्कोहोलिक फ्याटि लिभर रोग (NAFLD) को रूपमा चिनिन्छ
रक्तस्राव गुर्दा नेक्रोसिस।
Choline मेमोरी समारोह बढावा दिन, मस्तिष्क विकास सुधार र चिन्ता र अन्य मानसिक विकारको उपचार गर्न सक्छ।
कोलीनको सबैभन्दा धनी आहार स्रोतहरू मासु, माछा, दुग्ध र अण्डाहरू हुन्। धेरै फलफूल, तरकारीहरू र सम्पूर्ण अन्नहरूमा कोलोन पनि हुन्छ, त्यसैले शाकाहारी वा बोटमा आधारित डाइटमा व्यक्तिहरूको लागि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्।
मल्टिभिटमिनमा सामान्यतया कोलीन हुँदैन।
यद्यपि कोलोन - कलेजो, अण्डाको भुसी, र रातो मासु समृद्ध खाद्य पदार्थहरुमा सन्तृप्त फ्याटको मात्रा बढी रहेको पाइन्छ, कोलोनले सामन, बोसो, तिलपिया, कुखुराको स्तन, र फलफूल सहितको संतृप्त फ्याटमा कम खाद्य पदार्थ पाउन सकिन्छ।
वर्तमानमा, कुनै निश्चित क्लिनिकल टेस्ट छैन जुन कोलाइन अभाव भएकाहरू पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्लाज्मा कोलाइन, बेटाइन, र फास्फेटिडाइक्लोइनको एकाग्रताले मानवमा कोलोन-अभावयुक्त खाना खुवाउँदछ, तर ती plate०% .–०% पछि झर्छन्।
यसमा यसलाई अलि मीठा स्वाद छ जुन केवल सूक्ष्म रूपमा याद गर्न सकिन्छ। यो निश्चित रूपमा सबैका लागि चिनी विकल्प छैन।
ठुलो अवलोकन अध्ययनले कोलोन खपत र रगतको स्तरमा सुधार मस्तिष्कको कार्यसँग जोड गर्दछ, राम्रो स्मृति र प्रशोधन सहित। सँग पूरक 1,000 मिलीग्राम प्रति दिन कम स्मृति थियो जो aged०-–– उमेर वयस्क मा छोटो र दीर्घकालिक मौखिक स्मृति सुधार गर्न को लागी।
सिटिकोलिन यौगिकको लागि घटक नाम हो जुन रासायनिक रूपमा साइटिडिन-डाइफोस्फोचोलिन (CDP choline) सँग मिल्दोजुल्दो छ। केवल भिन्नता भनेको सीडीपी कोलाइन प्रकृतिमा मानवमा देखा पर्दछ, र सिटिकोलिन यस्तो पोषण हो जुन पौष्टिक पूरकहरूमा पाइन्छ।
सिटिकोलिनले न्युरोट्रान्समिटरहरूको उपलब्धता बढाउँदै सेलुलर संचारलाई बढावा दिन्छ, एसिटिचोलिन, नोरेपाइनफ्रिन र डोपामाइन सहित। सरल शब्दहरुमा, cicicoline कोलीन घटक Acetylcholine बनाउन प्रयोग गरीन्छ, जुन मानव मस्तिष्कमा एक प्राथमिक कार्यकारी न्यूरोट्रान्समिटर हो।
फास्फेटिडेल्कोलीन अण्डा, सोयाबीन, सरसों, सूर्यमुखी, र अन्य खाद्य पदार्थहरूमा रहेको एक रसायन हो। शब्द "फास्फेटिडेल्कोलीन" कहिलेकाँही "लेसिथिन" को साथ आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग हुन्छ, यद्यपि ती दुई फरक छन्। कोलाइन फास्फेटिडेल्कोलीनको एक अंश हो, जुन लेसिथिनको अंश हो।
यो ठूलो जनसंख्यामा आधारित अध्ययनमा, कोलीन एकाग्रता नकारात्मक चिन्ताका लक्षणहरूसँग सम्बन्धित थियो तर डिप्रेसन लक्षणहरूको साथ भने होइन।
प्लाज्मा स्तरमा परिवर्तनहरू कोलीन वा केही एमिनो एसिडहरूले यी न्यूरोट्रान्समिटरहरूको पूर्ववर्तीको मस्तिष्कको स्तरमा परिवर्तन ल्याउँछ। एसिटिल्कोलीनको लागि कोलाइन, सेरोटोनिनको लागि ट्रिप्टोफान, र क्याटेकोमाइन्सको लागि टायरोसिन।
एक माछा शरीर गन्ध।
यो रिपोर्ट गरिएको छ कि कोलोनले फ्याटको मेटाबोलिज्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ; यो एक ऊर्जा स्रोत को रूप मा प्रयोग को लागी फ्याट को टूट। कोलोनको यो कार्यले यसलाई मोटो कलेजो वा रगतमा बढी बोसो जस्ता अवस्थालाई रोक्न महत्वपूर्ण बनाउँदछ।
यसले ईर्ष्याहरू, टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, र छाला दाग सहित केही व्यक्तिहरूमा साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। जब शटको रूपमा दिइन्छ: अल्फा GPC POSSIBLY सुरक्षित छ जब उचित रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ईन्जेसन साइटमा ईर्ष्या, टाउको दुख्ने, अनिद्रा, भ्रम, र रातो लगायत केही व्यक्तिहरूमा यसले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ।
आहारमा सबै भन्दा सामान्य रूपहरू हुन्: फास्फेटिडेक्लोइन (पीसी), फास्फोकोलीन, अल्फा-जीपीसी, स्फिंगोमाइलिन, सीडीपी-कोलाइन, र निःशुल्क कोलाइन। फास्फोलिन, नि: शुल्क कोलाइन, र अल्फा-जीपीसी पानीमा घुलनशील हुन्छन्, जबकि फास्फेटिडाइक्लोइन र स्फिंगोमाइलिन फ्याट घुलनशील हुन्छन्।
अल्फा ब्रेन एक सुरक्षित nootropic पूरक हो। जे होस्, तपाईले औषधि अन्तर्क्रियाको हिसाबले केहि सानो साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ वा आवश्यक भन्दा बढी खपत गर्दा। यसैले तपाईं सिफारिश खुराक मा रहनु पर्छ र कुनै पनि nootropic पूरक लिनु अघि आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न पर्छ।
विभिन्न शारीरिक कार्यहरूमा अल्फा जीपीसीको बिभिन्न प्रभावहरूको विश्लेषण गर्न गरिएका सबै अध्ययनहरू सर्वसम्मतिले सहमत छन् कि यौगिक, जब यसको दैनिक सीमा भित्र खपत, पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छ। यद्यपि अल्फा GPC को अधिक सेवनले साइड-इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै टाउको दुख्ने, ईर्ष्या, अनिद्रा र चक्कर। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाहरूले यो कम्पाउन्ड उपभोग गर्नु हुँदैन किनकि गर्भवती महिलाहरूमा अल्फा GPC को प्रभावको अध्ययन गर्न अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरिएको छैन। त्यस्तै, यदि तपाईंसँग पूर्व-अवस्थित सर्त छ भने, कुनै पनि अल्फा GPC पूरकबाट सुरू गर्नु अघि तपाईको डाक्टरसँग सल्लाह गर्नु उत्तम हुन्छ।
तर त्यहाँ केहि सम्भावित साइड इफेक्टहरू छन्, टाउको दुख्ने, चिन्ता र निद्रा सहित।
सिफारिस गरिएको खुराकमा लिदा अल्फा GPC राम्रोसँग सहन गरिन्छ। धेरै वयस्कहरूको लागि स्वीकार्य खुराकको दायरा अपेक्षाकृत फराकिलो हुन्छ; -300००-१२०० मिलीग्राम को एक दैनिक दैनिक खुराक, जब एक वा दुई खुराक लिईन्छ, सुरक्षित र कुशल छ।
नूट्रोपिक्सको दुरुपयोग - कुनै पनि पदार्थ जुन संज्ञानात्मक प्रदर्शनलाई बदल्न, सुधार गर्न वा बढाउन सक्दछ, खासगरी न्यूरो ट्रान्समिटरको उत्तेजना वा अवरोधको माध्यमबाट - सम्भाव्य रूपमा मानव मस्तिष्कको लागि खतरनाक र हानिकारक हुन सक्छ, र मानसिक वा पदार्थ प्रयोगको इतिहासको साथ केहि व्यक्तिहरू। विकार हुन सक्छ।
पछिल्ला केही वर्षहरुमा, मानिसहरु उनीहरुको शरीरहरु लाई अधिक ध्यान दिन थाले। मस्तिष्कको सम्पूर्ण शरीरको नियन्त्रण केन्द्रको रूपमा मस्तिष्कको स्वास्थ्यको वरिपरिको कुराकानी एकदमै तीव्र भएको छ र दिमागमा कुनै खराबी भएमा यसले गम्भीर असर निम्त्याउन सक्छ। Choline मस्तिष्क स्वास्थ्य कायम राख्न र मस्तिष्कको कार्य सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसैले, धेरै आहार पूरकहरूले अब शरीरमा कोलाइन प्रदान गर्ने यौगिकहरू समावेश गर्दछ। त्यस्तै एक कम्पाउन्ड अल्फा GPC हो।
कफिलाई नूट्रोपिक मानीन्छ किनकि यसले क्याफिन समावेश गर्दछ। क्याफिन एक लोकप्रिय नूट्रोपिक हो जसले मुख्य रूपमा सतर्कता र मुड वृद्धि गर्दछ। Nootropics, व्यापक रूपमा "स्मार्ट ड्रग्स" पनि भनिन्छ संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार गर्न, मेमोरी र मस्तिष्कको कार्यक्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ।
को प्रभाव बुझ्नको लागि एक अध्ययन गरियो अल्फा GPC पावर आउटपुटमा पत्ता लाग्यो कि mg०० मिलीग्रामको खुराकले विकास हर्मोनको स्रावमा वृद्धि गर्दछ। यसैले, अल्फा GPC को एक मानक खुराक सामान्यतया 600०० देखि mg०० मिलीग्राम बीचमा हुन्छ र एथलीटहरूलाई माथिल्लो सीमामा रहन सल्लाह दिइन्छ।
यद्यपि, जब संज्ञानात्मक गिरावटको उपचारको कुरा आउँदछ, संज्ञानात्मक समारोहमा अल्फा GPC को प्रभावको विश्लेषण गर्ने प्रायः सबै अध्ययनहरूले प्रति दिन १२०० मिलीग्रामको एक मानक खुराक प्रयोग गर्‍यो, जुन three०० मिलीग्रामको तीन खुराकमा विभाजन गरिएको थियो। यस खुराकको रकममा कमीले १२०० मिलीग्राम खुराक प्रति दिनको जस्तै प्रभाव पार्न सक्दैन। तसर्थ, अल्जाइमर, डिमेंशिया, र टीआईएबाट पीडित बिरामीहरूलाई प्राय: १२०० मिग्रि / दिनको खुराकमा रहन सल्लाह दिइन्छ।
यसको संज्ञानात्मक स्वास्थ्य लाभहरूको विस्तृत श्रृंखला को कारण, CBD एक nootropic मानिन्छ। धेरै अनुसन्धानकर्ताहरू चिन्ता, उदासिनता, र तनाव जस्ता सामान्य मानसिक चुनौतीहरूको साथ मद्दत गर्न सीबीडीको क्षमताको बारे उत्साहित छन्।
① यो अल्जाइमर रोगको उपचारमा प्रभावकारी छ
वर्षौंको अवधिमा अल्जाइमरको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन यस परिसरको क्षमता अध्ययन गर्न धेरै अध्ययनहरू गरिएको छ। त्यस्तै एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि अल्फा GPC ले दिमागमा एसिटाइलकोइनको स्तर बढाउँछ। Acetylcholine बढेको दिमाग समारोह र सुधारिएको अनुभूति संग जोडिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अध्ययनले यो कुरा पनि पत्ता लगायो कि उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूमा अल्फा जीपीसीले दिमागमा रक्तनलीहरूको वरपरको सूजन कम गर्‍यो, जसले गर्दा मस्तिष्कको सुधार्न अग्रसर हुन्छ।
अनुसन्धानले यो पनि देखाउँदछ कि अल्जाइमर रोगबाट पीडित बिरामीहरूले दैनिक १२०० मिलीग्राम अल्फा GPC लिनबाट फाइदा लिन सक्छन। यस खुराकलाई to देखि months महिनाको अवधिमा सिफारिस गरिएको छ र यस घातक रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको सोच्ने क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ।
② यसले डिमेन्सियाको उपचारमा मद्दत गर्छ
धेरै मानिस डिमेन्शिया र अल्जाइमर बीच भ्रमित हुन्छन्। त्यसोभए दुई जना बिचको भिन्नता स्थापना गर्न आवश्यक छ। डिमेंशिया एक सामान्य शब्द हो जुन एक व्यक्तिको मानसिक क्षमतामा आएको गिरावटलाई वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ जुन ह्रासले व्यक्तिको दैनिक-दिनका कार्यहरूमा हस्तक्षेप गर्न थाल्छ। अल्जाइमर डिमेंशिया होइन तर एक विशिष्ट रोग हो जुन डिमेंशियाको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू मध्ये एक हो।
वर्षौंदेखि, डिमेन्शिया बिरामीहरूमा अल्फा GPC सेवनको प्रभावको अध्ययन गर्न धेरै अध्ययनहरू गरिएको छ। एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि al महिनामा नियमित अल्फा GPC सेवनले अनुभूति र हल्का देखि मध्यम पागलपनका बिरामीहरूमा फंक्शनमा सुधार गर्दछ। त्यस्तै, अर्को अध्ययनले डिमेन्शिया र सेरेब्र्रोवास्कुलर रोगबाट पीडित बिरामीहरूको अनुभूतिमा सुधारको साथ नियमित अल्फा GPC उपभोगलाई जोडेको छ। निष्कर्षमा, डिमेंशियाबाट पीडित व्यक्तिहरूले दिन प्रति खुराकको १००० मिलीग्राम अल्फा GPC लिनबाट ठूलो फाइदा लिन सक्दछन्। त्यस्ता बिरामीहरूमा, अल्फा GPC सेवन सुधार व्यवहार, मुड, र अनुभूति संग जोडिएको छ।
③ यो क्षणिक इस्केमिक आक्रमणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ
ट्रान्जियन्ट इस्केमिक अट्याकहरू (टीआईए) न्युरोलॉजिकल डिसफंक्शनको संक्षिप्त भाग हुन्, जुन अक्सर दिमाग र आँखामा रगतको आपूर्तिमा अवरोधका कारण हुन्छ। ट्रान्जियन्ट इस्केमिक आक्रमणहरू सामान्यतया केहि मिनेटको लागि हुन्छ तर तिनीहरू स्ट्रोकको पूर्ववर्तीको रूपमा देखिन्छन्। स्ट्रोक र TIA बिरामीहरूमा अल्फा GPC को प्रभाव अध्ययन गर्न एक अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले पत्ता लगायो कि २ who दिनको लागि हरेक दिन १२०० मिलीग्राम अल्फा GPC शट लिने व्यक्ति, १२०० मिलीग्राम / दिन अल्फा GPC को दिन (मौखिक उपायहरू मार्फत) छ महिनाको लागि, राम्रो सोच्ने क्षमता र टीआईएबाट राम्रो रिकभरी देखाए ।
④ यसले प्रभावकारी नूट्रोपिक सप्लिमेन्ट बनाउँछ
Acetylcholine एक जैविक रसायन हो कि एक neurotransmitter को रूप मा काम गर्दछ र मेमोरी र सिकाई कार्यहरु को लागी महत्वपूर्ण छ। अल्फा GPC मस्तिष्क भित्र यो रासायनिक वृद्धि गर्दछ, यसरी बृद्धि स्मृति र अनुभूति गर्न को नेतृत्व। यसैले, अल्फा GPC प्राय: Nootropic आहार पूरकहरूमा एक मुख्य घटकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
⑤ यसले एथलेटिक प्रदर्शन सुधार गर्छ
एथलीटहरूमा, अल्फा GPC सेवन कोलोनमा व्यायाम-प्रेरित कटौतीसँग जोडिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो वृद्धि वृद्धि हर्मोन उत्पादन र बृद्धि धीरज प्रदर्शन संग पनि जोडिएको छ। यसैले प्रशिक्षक र प्रशिक्षकहरूले अक्सर एथलीटहरूलाई अल्फा GPC उपभोग गर्न सल्लाह दिन्छ।
(1)। युएस राष्ट्रिय पुस्तकालय मेडिसिन नेशनल इंस्टिट्यूट अफ हेल्थ, गट्टी जी, बर्जागी एन, अकुटो जी, अबियाती जी, फोसाटी टी, पेरुक्का ई।, १ 1992 30 २ सेप्टेम्बर; (० ()):9331१-।।
(2)। डगग्रील SA & इभान्स एस; इभान्स (अक्टु। २०० 2003) "न्यूरोट्रान्समिशन मोडुलनको साथ डिमेंशियाको उपचार"। विज्ञहरुका विचार अनुसन्धान औषधिहरु। १२ (१०): १––––१12।।
(3)। पार्नेट्टी, लुसिला; एट अल। (२००)) "संज्ञानात्मक कमजोरी को उपचार मा Cholinergic अग्रदूत: अप्रभावी दृष्टिकोण वा पुन: मूल्यांकन को लागी आवश्यकता छ?" मस्तिष्क विज्ञानको जर्नल। २2007 (१–२): २––-।।
(4)। यात्रा अन्वेषण को लागी उदा।
(5)। Oleoylethanolamide (oea) - तपाईंको जीवनको जादुई छडी।
(6)। आनंदमाइड बनाम सीबीडी: कुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ? तपाईंले उनीहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा!
(7)। निकोोटोनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
(8)। म्याग्नेशियम l-थ्रोनेट पूरक: लाभ, खुराक, र साइड इफेक्ट।
(9)। Palmitoylethanolamide (मटर): लाभ, खुराक, प्रयोग, पूरक।
(10)। शीर्ष health स्वास्थ्य लाभहरू रेवेराट्रोल पूरकहरूको।
(11)। फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) लिनका शीर्ष benefits लाभहरू।
(12)। पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (pqq) लिने शीर्ष5फाइदाहरू।
(13)। निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) को उत्तम एन्टी एजिंग पूरक।
अल्फा- gpc पक्कै पनि मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो nootropics। म १ brain०mg दिनमा प्रयोग गर्दछु म दिमाग बढावा लिन चाहन्छु।
के म सबैभन्दा धेरै अचम्मित भएँ यसले एथलेटिक प्रदर्शन र रिकभरी यति राम्रोसँग बढावा दिन सक्ने क्षमता थियो। बास्केटबल खेलाडीको रूपमा, निश्चित रूपमा निश्चित रूपमा यो PED हो। तपाईं आफ्नो शरीर र यो कसरी चाल मा नियन्त्रण मा अधिक महसुस, ठीक मांसपेशि चालहरु र समन्वय पर्याप्त वृद्धि भएको छ।
म अब केवल 300mg लिन्छु। २ महिना सीधा लिएको। कुनै डिप्रेसन छैन। जिमका लागि मात्र ऊर्जा।
म हरेक दिन बिहान m००mg लिन्छु। शुरुका केही वर्षमा केही हप्ता पछि म अलि निराश भएको महसुस गरें, त्यसैले केही दिनको लागि विश्राम लिने छु। अब जब म एक विश्राम लिन्छु र यसमा फिर्ता आउँछु, यसले मलाई कठोर पार्छ र म एक वा दुई रात धेरै उपयुक्त सपनाहरू पाउँछु। धेरै गहिरो निन्द्रा छैन। यो मेरो मनपर्ने कुरा होईन। यसले मेरो लागि मानसिक कुहिरोको जीवनभरको समस्या समाधान गरेको छ। म अब अधिक केन्द्रित र सामाजिक सतर्क छु, र मसँग अधिक शारीरिक उर्जा छ। म अरू सबैलाई चिन्छु जसले भन्छन कि उनिहरु निराश हुन्छन् - र म स्वीकार गर्दछु कि धेरै-धेरै - कोलाइन उदासीनता संसारको सबैभन्दा खराब चीज हो र यसले तपाईको दिनलाई बिगार्नेछ। त्यसोभए यदि कसैले यो पढिरहेको छ र यसलाई प्रयास गर्ने सोच्दै छ भने, सबैभन्दा कम सम्भव डोजबाट सुरू गर्नुहोस्, हुनसक्छ प्रत्येक अरू दिन वा सो भन्दा पनि लामो समयमा, र तपाईंले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्।
मेरो लागि यो ठूलो काम गर्दछ। म इमान्दारै धेरै अपेक्षा गरेको थिएन तर हरेक पटक जब म यो लिन्छु म अधिक केन्द्रित महसुस गर्छु र स्मृति बढेको छु।
म धेरै अध्ययन गर्दछु ताकि प्रभावहरू मेरो लागि धेरै ध्यान दिएका छन्। म १-150०--300०० मिलीग्राम लिन्छु।